कोरोना भाइरसबाट विश्वभर ९६ नेपालीको मृत्यु, ६ हजार ७८१ संक्रमित – कुन देशमा कति ? – Upahar Khabar
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर ९६ नेपालीको मृत्यु, ६ हजार ७८१ संक्रमित – कुन देशमा कति ?
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:३१ May 17, 2020
लण्डन – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण विश्वभर ९६ नेपालीको मृत्यु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जनाएको छ । यो तथ्यांक शनिवार साँझसम्मको भएको एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ ।
भारतमा लकडाउनको अवधि २ हप्ता थप्ने तयारी
अब सीमामा भारतकै सरह शसस्त्रको बीओपी